EasyJet inobhururuka ichibva kuGatwick Airport paSustainable Aviation Fuel
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » EasyJet inobhururuka ichibva kuGatwick Airport paSustainable Aviation Fuel
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
EasyJet inobhururuka ichibva kuGatwick Airport paSustainable Aviation Fuel.
Ndege dzinokwana makumi mana nenomwe dziri nyore dzinoshanda kubva kuGatwick Airport dzinofanirwa kupihwa simba ne42 muzana Neste YANGU Sustainable Aviation Fuel musanganiswa.
Kwenguva yekutanga ndege inobuda kuGatwick yashandisa mafuta ekuchengetedza ndege (SAF).
Q8Aviation yakaendesa iko kwekutanga kupi kweNeste YANGU Sustainable Aviation Fuel kumafuta emafuta kuGatwick Airport.
Inosimbisa kuzvipira kwakasimba kwemapato ese anobatanidzwa kuzadzikisa kudzikiswa kwemhepo kabhoni mumafuta anoshandiswa mukubhururuka uye kushandira kune chakanangana chinangwa chekubhururuka kusvika neti zero emissions na2050.
Nekutanga kusimuka nhasi, huwandu hwese hwe42 nyoreJet ndege dzinoshanda kubva Gatwick Airport dzinofanirwa kupihwa simba ne30 muzana Neste YANGU Sustainable Aviation Fuel ™ musanganiswa. Ichi chiitiko chakakosha chinoratidzira kekutanga nguva yekubva ndege kuGatwick ichishandisa yakaringana nendege mafuta (SAF) uye zvakare ndiyo yekutanga kushandiswa nechero nyore Jet sevhisi. Inosimbisa kuzvipira kwakasimba kwemapato ese anobatanidzwa - epasi rese aviation mafuta mutengesi Q8Aviation, nyoreJet, Gatwick Airport Ltd uye Neste - kuzadzisa kudzikisira kabhoni mumafuta anoshandiswa mukubhururuka uye kushandira kune chakanangana chinangwa chekubhururuka kusvika kune zero zero emissions muna 2050.
Pamakwikwi makumi mana nemaviri anomhanya paNeste YANGU Sustainable Aviation Fuel musanganiswa, 42 yeaya achave ari nyoreJet nendege dzinoshanda kubva kuGatwick kuenda kuGlasgow muCOP26 Yemamiriro ekunze ekuchinja Musangano, iyo inomhanya kubva 31st Gumiguru kusvika 12 Mbudzi. Mhiri kwendege dzese makumi mana nesere, gasi yekupisa gasi inodzikiswa kusvika pamatani makumi manomwe ayo anoenderera achiratidza zvinangwa zveindasitiri yekudzikisa gasi inokanganisa kupisa girazi panzira yekusvitsa zero zero ne42.
Q8Aviation yakaendesa iko kwekutanga kupi kweNeste YANGU Sustainable Aviation Fuel kune iyo peturu ku Gatwick Airport. Neste's musika-inotungamira inoenderera nendege mafuta, ayo anozivikanwa zvizere, inogadzirwa kubva ku100% marara anomutsiridzwa uye akasimba uye zvisaririra zvigadzirwa, senge anoshandiswa ekubikisa mafuta nemafuta emhuka. Mune chimiro chayo chakatsetseka uye pamusoro pehupenyu hwayo, Neste YANGU Sustainable Aviation Fuel inogona kuwana kudzikisira inosvika ku80% * yegreenhouse gasi emissions ichienzaniswa neyefossil jet peturu kushandiswa.
Neste-inogadzirwa SAF inosanganiswa neJet A-1 peturu padepoti yekumusoro kwerwizi rweGatwick Airport kugadzira mafuta anodonhedza anoenderana neinjini dze ndege nendege nendege, pasina kuda mari yekuwedzera. Q8Aviation yakaendesa mafuta kumatangi makuru ekuchengetera paGatwick Airport kuti igove nendege yeJetJet kuburikidza neiyo airport iyo hydrant system.
Kubatanidzwa kweSAF mukuita kwaGatwick kwekubhururuka kwanhasi chiratidzo chakakosha chefungidziro kunhandare yendege pakuratidzira kuzvipira kwayo kwekushandira pamwe neyavanoshanda navo nendege pane decarbonization. Gatwick ya2019 kabhoni tsoka yakaratidza kuti nhandare yendege yatove hafu-nzira yekukwira zero kuita kwayo uye yakazvipira kuzadzisa hutachiona hweNet Zero na2040.
Jonathan Wood, Mutevedzeri weMutungamiriri Europe, Renewable Aviation kuNeste akati: "Indasitiri yendege yatotora matanho akakosha ekuderedza kukanganisa kwayo nharaunda. Chinhu chakakosha mukuzadzikisa izvi kuiswa kwakapetwa kwemafuta anofamba nendege. Neste iri kuisa mari sezvatinotaura kuwedzera kugona kweSAF kubva pamatani zana emamiriyoni kusvika pamamirioni 100,000 mamirioni pagore muna 1.5. Neste inogamuchira zvirevo zvehurumende zvekukurudzira kushandiswa kweSAF kudzikisa kuburitsa gasi inokanganisa gasi. Izvo zvakakosha kuti ndege dzinowedzera uye dzakawanda, nhandare uye vanopa mafuta vatungamire nzira kune ramangwana rinogadzikana rekubhururuka. "Tinofara kugamuchira easyJet, Q2023Aviation uye Gatwick Airport pakati pevatambi ava."
Naser Ben Butain, General Manager Q8Aviation akati: “Tinofara kutamba chikamu chedu mukupa mafuta emuchadenga ekutanga kuJetJet kuGatwick. "Takaita mubatanidzwa wakasimba ne easyJet kwemakore mazhinji, uye tinobatsirwa nerutsigiro rwakanaka kubva kuGatwick Airport Ltd neNeste, uye tinotarisira kushanda pamwe nevose vatinoshanda navo kusimudzira zvinangwa zvedu zvekuchengetedza."
Jane Ashton, Director weSustainability pa nyoreJet yakati: "Pa easyJet, tinoda kutamba chikamu chedu kutungamira decarbonization yendege. Tiri kufara kuzivisa kuti nhasi tiri kushanda tichishandisa SAF mune humbowo hwepfungwa yekubhururuka kubva kuGatwick tazvipirawo kushandisa SAF musanganiswa pendege dzese dzinoshanda kubva kuGatwick kuenda kuGlasgow muCOP26 yese, nekuda kwekushandira pamwe nevamwe vedu muchirongwa ichi. Kuwanika kweSAF kuchiri kuda kukura asi ichave yakakosha mhinduro yepakati munzira yedu ye decarbonisation, apo isu tiri kutsigira kuvandudzwa kwendege zero-emission, inova ndiyo mhinduro inogadzikana pamatanho epfupi senge edu nguva refu. Zvichakadaro, tiri kushanda nendege dzedu zvakanaka sezvinobvira uye parizvino ndiyo chete ndege huru yekuEurope yekudzora kabhoni kubva kumafuta anoshandiswa kwendege dzese, izvo zvine chekuita izvozvi. "
Tim Norwood, Director we Corporate Affairs, Planning and Sustainability yeGatwick Airport vakati: "Tinofara zvikuru kushanda ne easyJet, Q8Aviation neNeste kuratidza kushandiswa kweSAF paGatwick Airport. SAF ndeimwe yenzira dzinoverengeka iyo UK yekufambisa nendege uye Gatwick ichasvika net zero kabhoni na2050, padivi nekabhoni, nzvimbo yemuchadenga uye nekuenderera mberi kwehunyanzvi muaerospace tekinoroji, kusanganisira magetsi, ehydrogen uye ehybrid ndege masystem. Iine hurongwa hweHurumende hwehungwaru hwekutsigira mari mukukwikwidza kugadzirwa kweUK SAF, dzimwe ndege zhinji dzinogona kunge dzichishandisa UK yakaburitsa SAF pakati pe2020s. Kuzadzisa kuburitswa kweNet Zero na2050 zvese idambudziko rakakura uye mukana weindasitiri yedu. "Sustainable Aviation's decarbonization roadmap uye zvinangwa zvenguva pfupi zvinoratidzira zviitiko zvakakosha uye isu takagadzirira kutamba chikamu chedu kuGatwick, kuburikidza nekushandisa nzira yemigwagwa yemakore gumi ekutanga uye nekuchengetedza gwara remugwagwa kuti riwedzere mamwe maekinoroji mhinduro kuma2030."
شات بنوتة anoti:
Gunyana 29, 2021 pa 19: 41
Wow, inyaya yakanaka kwazvo. Ndinoifarira zvikuru. Ndinovimba kuti muchaenderera mberi nenyaya dzakadai. Ndatenda. Kwaziwai.
Gunyana 20, 2021 pa 13: 29
شات العراق للجوال شات صوتي